एक किलो तरकारीको मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ - नेपालबहस
एक किलो तरकारीको मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ
| २१:१४:२१ मा प्रकाशित
२६ भदौ, एजेन्सी । तपाईले एक किलो तरकारीको मूल्य कति हाल्नुहुन्छ ? २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, १०० रुपैयाँ वा त्यो भन्दा बढी बढी ५०० रुपैयाँ । तर संसारमा एउटा यस्तो तरकारी बजार छ । जहाँ एक किलो तरकारीको मूल्य डेढ लाख पर्छ ।
‘हप शुट्स’ नामको यो तकारी लाग्ने फूललाई ‘हप कोन्स’ भनिन्छ । सोही फूललाई बियर बनाउन प्रयोग गरिन्छ । बोटको बाँकी भागलाई तरकारी वा सलादको रुपमा खाइन्छ । यो तरकारी यति धेरै महँगो हुनाका कारण कुनै तरकारी बजार वा सुपरमार्केटमा सायदै पाइएला ।
सबैभन्दा पहिले यो वनस्पतीको खोज उत्तरी जर्मनीमा भएको थियो । त्यसपछि यसको प्रयोग विस्तारै पूरै विश्वमा नै फैलिएको छ । यसको मूल्य झन झन् बढ्दै गएको छ ।
पढाइ शुल्क तिर्न नसक्दा मिस्त्रीको काम शुरु ४ मिनेट पहिले
युवतीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, शरीर खोलामा फालेर टाउको गायब ! १३ मिनेट पहिले
मास्क सिलाउन व्यस्त महिला २३ मिनेट पहिले
कथा: कर्णकाे बयान ३३ मिनेट पहिले
कोरोनाले शिक्षण अस्पतालकी कर्मचारीको मृत्यु, २०० स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ! ३८ मिनेट पहिले
युवतीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, शरीर खोलामा फालेर टाउको गायब ! १४ मिनेट पहिले